Ciyaaraha - BBC Somali - Mawduuc
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Luulyo, 2014, 13:45 GMT 16:45 SGA
Taariikhda Koobka AdduunkaMaqal03:17
Koobka kubadda cagta ee adduunka ee ka socda waddanka Brazil waa kii 20-aad tan iyo markii ay ciyaarahan bilowdeen 1930-kii.
Brazil oo la filayay inay la soo baxdo ciyaar aad u wanaagsan ayaa goolkii ugu horeeyay ee Koobka duunka 2014-ka looga hormaray.
Taariikhda Kooxda AljeeriyaMaqal02:51
Xulka Qaranka kubadda cagta ee Aljeeriya ee ka qeybgalaya ciyaaraha koobka adduunka, ayaa ah kuwo tayo leh, iyaga oo hoos iska soo dhisay.
Shaqaalaha magaalada ugu weyn dalka Brazil ee Sao Paulo ayaa hakiyay shaqo joojin ay sameyn lahaayeen maalinta furitaanka koobka ciyaaraha dunida.
Buugga Koobka AdduunkaDaawo02:19
Buugga Koobka Adduunka, waxaa uu soo koobayaa dhacdooyin muhiim ah oo la xiriira Koobka Adduunka.
Cayaaraha Kubadda Cagta Fifa ee Brazil 2014.
Kor ka daawo BrazilDaawo01:57
Ka hor bilaabashada cayaaraha, BBC News ayaa wax badan ka diyaarisay dalka oo aan ku ekayn waddooyinka. Qalabka duula ee hexacopter BBC hawada loo diray si loo eego Brazil sida ay u eg tahay marka dusha laga sawirro. 9 June 2014
Barnaamijka cayaaraha waxaa soo jeedinaya Aden Sabrie.
Daawo: Qadar oo lagu eedeynayo musuqmaasuqDaawo02:06
Masuuliyiinta FIFA ayaa baaraysa eedeymo la xiriira in lacag la bixiyay si Qadar ay u qabato koobka adduunka ee kubadda cagta ee sanadka 2022.
Qadar oo la kulmaysa FIFA Qaban-qaabiyeyaashii dalka Qadar ee Koobka Adduunka, ayaa la kulmaya maanta Michael Garcia, oo ah baare ka socda FIFA.